Marcus Garvey: fofon'aina pan-afrikanisma - Afrikhepri Fondation
Fifandraisana AFRIKANANA SY NY FAHAMARINANA
Marcus Garvey: Afangon'ny pan-afrikanisma
Marcus Missouri Garvey, zanaka farany tamin'ny fianakaviana 11, dia teraka tamin'ny 17 Aogositra 1887 tao St Ann's Bay, Jamaika tamin'ny 1887. Miaina anaty toe-pahantrana izaitsizy izy. Tena mahery vaika, ka ny zandriny rehetra, ankoatry ny rahavaviny Indiana, dia ho faty mandritra ny fahazazany. Saingy, tsy nahantra foana ny fianakaviana Garvey. Ny rainy, mpahay sanganasa nahay, dia mpisolovava indraindray ary nanana tranomboky tsy miankina iray. Ary tsy isalasalana fa avy aminy fa i Marcus Garvey dia nahazo ny fitiavany hamaky. Noho ny tsy fahampian'ny vola ara-bola dia voatery nanary ny fianarany i Garvey tamin'ny faha-14 taonany hiditra amin'ny mpiasa.
Liana tamin'ny famakiana izy, dia nanomboka niasa tao amin'ny trano fanontam-pirinty izay namboariny haingana. Tany am-piandohana dia nahazo andraikitra lehibe sy toerana manan-danja ao anatin'ny orinasa izy. Afaka nijanona teo ilay rangahy. Saingy efa misy ny faniriana hiady amin'ny tsy fahamarinana sy ny tsy fitoviana. Raha ny marina, tamin'ny 1907, tamin'ny faha-20 taonany, dia nandray anjara tamin'ny fikomiana voalohany nataon'ny sendikan'ny mpanonta printy Jamaikana izy, izay nanjary niseho tamin'ny lisitra mainty ary voaroaka avy eo.
Fotoana fohy taorian'izay dia namorona gazety izy: "the Watchman" ("the watchman" na "the guardian") izay ho voalohany amin'ny lisitra lava be an'ny gazety miha mirona.
Mba hamolavola tetikasa vaovao ary hahitanao ireo zary vaovao dia mandeha any Costa Rica ao 1909 i Garvey. Eto an-tany eto amin'ity tontolo ity no hanaovany ny traikefa fanaintainana fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fisarahana.
Mahatsapa ankehitriny Mila mianatra momba ny toe-piainana ny mainty hoditra eto amin'izao tontolo izao, ary afaka ny tsy ho voky fahalalana teorika (Garvey satria mihoatra noho ny zavatra, rehefa manasongadina eto ambany, ny pragmatist zavatra mivaingana izay mitombo tsara ary tsy ny idealy fotsiny ihany), dia manapa-kevitra ny hitsidika ireo firenena rehetra ny mpivaro-tena izay hitarika ny mainty hoditra efa reraka avy any amin'ny tanin'i Afrika.
Circling Karaiba sy Amerika Atsimo (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Kolombia sy Venezuela), Marcus Garvey Môsià dia namely ny fanamavoana izay nitondrany ny mainty hoditra sy ny toe-javatra ho ambany izay izy dia mitazona eny rehetra eny.
Mazava ny fanamarihany: “na aiza na aiza, voahilikilika ny Negro, notazonina tamim-pahefana tao amin'ny farany ambany amin'ny tohatra fiarahamonin'olombelona, ​​satria mainty izy. Raha tsy misy fiheverana kely, na ny toetra maha-olombelona azy, na ny mety ho fahiratan-tsaina na fanomezana nomeny. Na aiza na aiza no anananan'ny Negro ny hasina ambany indrindra; na aiza na aiza izy serf, andevo, "peone" ". Na aiza na aiza alehany, ny mainty hoditra dia ambany toerana ambany kokoa noho ny an'ny hafa rehetra.
Avy amin'ny fijerena ny herisetra maharitra sy isan'andro isan'andro amin'ny vahoaka mainty. Miatrika an'io fanoloran-tena fatratra io ny hanitsakitsahana azy na inona na inona, dia nanapa-kevitra i Marcus Garvey handray anjara amin'ilay tolona.
Ny lehilahy (mpitarika voajanahary) dia mampirisika ny mpiasa mainty hoditra hitaky ny sendikà, ny fepetra fiasana tsara kokoa ary ny karama tsaratsara kokoa. Amin'ny maha-lehilahy ny fifandraisana, ny endri-tsoratra noforonina, ny gazety ("La Nacion" sy "La Prensa") ao Costa Rica sy Panama dia maneho ny fitakiana ara-drariny.
Miatrika zava-mitranga toy izany ny governemanta KostaRikana (mahita azy ho Toussaint Louverture faharoa) dia liana haingana ny asan'ny Jamaikana ary tsy ela dia nandroaka azy avy any amin'ny faritany.
Nanaiky ny tenany hiverina tany Jamaika i Marcus, ka nandiso fanantenana azy noho ny ezaka nataony. Gaga izy fa noraisina ho maherifo nasionaly izy. Jamaikana maro no mahita azy ho lehilahy mpiady. Lehilahy avy amin'ny vahoaka, lehilahy mijaly, olona manana fahasamihafana ary mpitarika mavitrika. Izany no fomba azontsika hamaritana ny tanora Mosiah Garvey. Ilay lehilahy izay efa naheno ny feony dia naheno tamin'ny tolona mba hanatsarana ny toe-piainana misy ny mainty hoditra.
Nampiroborobo ity firenena sy ny fanohanana matanjaka avy amin'ny mpomba ny Negrists hevitra in 1912, Garvey no loha izao fotoana Eoropa, izay indrisy nanao ny fandinihana izany; koa tany Amerika, ny olona mainty hoditra dia nampijaly sy hararaotina tsinontsinona sy ny hatezerana.
Nomarihin'ny toe-javatra ambany kokoa indray ny mainty hoditra teo amin'izao tontolo izao, Garvey avy eo dia nanao izay tolona nataony teo amin'ny fiainany ary hibodo azy mandra-pahatongan'ny fofonainy farany. Ny fananganana ny lohan'ny mainty hoditra ary hamerenany ny fahamendrehany.
Raha te-hiaina dia nitana andraikitra matanjaka tao amin'ny seranan-tsambon'i Londres sy Liverpool izy, fa tsy nanakana azy tsy hitady fotoana hatramin'ny faribolan'ny manam-pahaizana Pan-Afrikanina matetika. Nihaona manokana izy tao Mohammed Ali Duse (filohan'ny pan-afrikanisma hatramin'ny voalohany) izay nisy fiantraikany lehibe tamin'ny ho avin'i Garvey ary izay nandefa gazety israelista pan-Afrikanina: "The Africa Times and Orient Review" izay hanomezan'i Garvey anjara. Ity fivoriana ity dia ho fanambarana ho an'i Marcus Garvey ary ho toy izany koa ny famakiana hataony momba ny sanganasan'i Booker T. Washington "Miakatra avy amin'ny fanandevozana". Satria aorian'ity famakiana ity dia handray ny antoko i Garvey haneho ny tenany ho mpitarika ny vahoaka mainty.
Mahery noho ny zavatra ninoany, ary misy ny filàna hamerina amin'ny mainty hoditra ny fiheveran-tena ho azy, very vokatry ny fanandevozana, fanjanahana, fanamavoana ary fanompana isan'andro, ilay lehilahy lehibe dia nahatakatra haingana fa ny ady dia tokony hatao amin'ny sehatra iraisam-pirenena. fototra ary indrindra ny momba ny fampahalalana sy ny hevitra. Izany no fomba anaovany fanaraha-maso, fampahalalana ary fanazarana ireo foko mainty miparitaka erak'izao tontolo izao, mba hahafahan'izy ireo mahazo miditra amin'ny fahatsiarovan-tena tsy ny mombamomba ny vondrom-piarahamonina tokana ananany, fa koa amin'ny toerana onenan'izy ireo, amin'ny fomba marina, toy ny negro amin'ny fampisehoana ataon'ireo firenena.
Manapa-kevitra ny hanomboka ny asany any am-pon'ny firenena nahaterahany izy. Toy izao ny 17 June 1914, nandao an'i Angletera izy mba hiverina any Jamaika izay tena hanomboka ny hetsika politika.
Nanangana araka izany i Garvey, tamin'ny 1914, tao Kingston any Jamaica, ny UNIA Universal Negro's Improvement Association (ny Universal Association for the Progress of the Blacks) izay manana ny teny filamatra mazava indrindra: "Aim-panahy iray, Andriamanitra iray, iray ny lahatra" (Andriamanitra iray tokana, tanjona iray, lahatra iray).
Fikambanana izay ny tanjony dia ny hitondra ny feon'ny mainty hoditra araka izay tratra ary hanome azy ireo fitaovam-piadiana mety hamela azy ireo hanana fahalalahana ara-tsaina sy ara-batana, mba hitarika amin'ny fananganana firenena sy governemanta mainty.
Ary ny tanjon'ireo mpitarika karismatiana dia ny hitondra izany feo sy fofona manan-kaja izany amin'ny sofin'ireo rehetra Negroes, na aiza na aiza misy azy. Vetivety dia misy an-jatony ny mpikambana. Nefa i Garvey, mba hanomezana ny hafany ho mendrika ho an'izao tontolo izao, dia mandao an'i Jamaika ho an'ny firenena efa nitsidika an'i 1912: Etazonia.
Tamin'ny 1916, niainga tany Etazonia i Marcus Garvey (firenena faharoa fanesorana ireo mainty hoditra maro an'isa aorinan'i Brezila) izay nahitany onjam-pifandraisana mahery vaika izay ahitan'ny hafatra afrikanista sy fanafahana mahita akony mahatalanjona. Indrindra fa efa mampandre ny feony ny mpitondra mainty.
Any Etazonia, i Garvey dia mahita ny firenena iray misy ny olona mainty indrindra ao anatin'ny toe-javatra mampalahelo. Mihoatra noho ny toerana hafa, mainty ny mainty.
Alohan'ny hialan'ny mpamaky sasany amin'ny fieritreretana fa ny fitsanganan'ny Eoropeana mainty dia somary nanirona kokoa, aleo marihintsika amin'ity lafiny ity fa ity toe-javatra manokana any Etazonia ity dia namela ny fahatsiarovan-tena haingana kokoa ny mainty hoditra sy ny fisian'izy ireo ho hery fanoherana ary mety ho lobby. ho re sy hitaky fanajana avy amin'ny vondrom-piarahamonina hafa. Ny fanavakavaham-bolon-koditra eropeana, masiaka be sy mampidi-doza kokoa, mahatonga ny olona hino ny fampidirana azy dia nisy fiantraikany fotsiny tamin'ny fisorohana ny fahatsiarovan-tena sy ny fahanginana hatramin'ny androany. Ny tsy fahampian'ny fitakiana izay mametraka ny mainty ho ambanin'ny firenena toa an'i Frantsa ankehitriny. Hatraiza no nahatongavantsika teo amin'ny raibe sy renibenay sy antsika?
Tsy misy. Ny tsy fisian'ny fanamafisana matanjaka sy mazava, ny vondrona mainty mitaky fanehoana ny maha-solontenan'ny tena sy ny fanajana ny maha-solontenany dia tsy afaka manampy antsika. Tokony hatsahatra izany.
Ho an'ireo izay mino fa miala amin'ny lohahevitra… Mifanohitra amin'izay no izy. Marcus Mosia Garvey Le Grand, tamin'ny fikirizany sy ny fahareseny lahatra, dia nametraka ny paikady stratejika tolona Negro rehetra. Hiverina amin'izany isika.
Tapa-kevitra ny handray an'io fanamby io sy hiady amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny Afrikanina-Amerikanina, i Garvey (marina amin'ny tenany) dia mitsidika fanjakana amerikana mihoatra ny telopolo mba hahatsapany fa mahomby kokoa ilay ratsy noho izy tsy mila miady.
Ny hetsika nataony voalohany dia ny hametrahana ny foiben'ny UNIA ao New York mba hananganana an'i Etazonia, ivon'ny hetsika nataony.
Amin'ny fomba fijery mavitrika sy be zotom-po ihany, Garvey tsy afaka (araka ny hitantsika) nieritreritra ady natao tamin'ny sehatra isam-paritra na nasionaly tsotra izao ary nitondra hatramin'ny voalohany ny hevitra momba ny tolona iraisampirenena. Miaraka amin'izany ao an-tsaina no namoronany manodidina ny telopolo an'ny UNIA eran'izao tontolo izao, ny tanjona tsy miova dia ny hampivondrona ny "Ny mainty rehetra eto an-tany ao anatin'ny orinasa lehibe iray ary hamorona firenena sy governemanta iray. Izay azy ireo ”niray hina tamin'io teny filamatra io ihany:“ Andriamanitra Iray! Tanjona iray! Lahatra tokana! ". Nidina avy aiza na aiza ny mpikambana. Tamin'ny 1921, nanombatombana tamin'ny 6 tapitrisa Garvey, ny isan'ny mpikambana ao amin'ny Fikambanana Universal ho an'ny Fandrosoana ny mainty manerana an'izao tontolo izao.
Avy hatrany dia nalain'i Garvey taminy, ny hafanam-pon'ny eropeana (frantsay, anglisy, espaniola, holandey, portogey ary mpivarotra andevo hafa rehetra) nahazo tombony be avy amin'ny fitrandrahana ny kaontinanta afrikanina sy ny zanataniny izay notohanany (ary mbola minono) mandra- nangetaheta ireo akora manta izy ireo ary nanatanteraka ilay iraka sivily sivily malaza malaza ry zareo.
Hitan'izy ireo tamin'ny maso ratsy ny fofon'ilay emanipipation izay nilaza fa maneran-tany ary nikasa ny hanafaka ny tsy fisian'ny firenena. Ankoatra ny toerana rehetra misy ireo olo-malaza malaza ireo dia nahita (ary mbola hitanay) teo ambadik'izy ireo, ireo mpilalao malaza nalaza ireo mba hanararaotra azy ireny.
I Garvey dia lasa lehilahy maty. Ity sata vaovao ity dia nanamarina ny hevitr'i Garvey. Izy dia teo amin'ny làlana marina. Ary arakaraka ny habetsahan'ireo horohorontany sy ny hatezerana dia nifantoka sy nifantoka taminy izy, arakaraka ny niaretany tamin'ny ady nataony mba hampahafantarana sy hanairana ny sain'ny olona.
Ny ao anatin'ity lohahevitra ity izay teraka "The Negro ny World" ( "The World Negro"), ny UNIA gazety, naorin'i Garvey tamin'ny Janoary 1919, mba hampiofanana sy hampianarana, ary fametrahana an'ireo Mainty Hoditra handroso ny hevitra nisy olona mainty iray nanafaka sy nahita ny fakany lalina tao amin'ny firenena izay nandefasany azy tamin'ny heriny: Afrika. Ary ny maha-nasionalista azy rehetra dia ny hiverenana handray anjara amin'ny fananganana fanjakana maherin'ny mainty mahery.
Manaparitaka ny gazetiny manerana ny kaontinanta amerikana (avy any Amerika Atsimo ka hatrany Amerika Avaratra) ary mizara izany amin'ny fiteny maro, fa tsy misy fiteny kolonialy (Anglisy, Frantsay, Portiogey, Espaniôla ary Holandey), ilay mpitarika mainty hoditra, dia nahatonga ny kabarim-panaon'ny Afrikanina, lahateny iray izay mety hikasika sy hanafaka ny fahatsiarovan-tena, na inona na inona ny ligy. Amin'ny fanaovana izany, ny fofon'ilay Pan-Afrikanisma.
I Garvey no lasa mpilalao sarobidy indrindra ary ny iray nanodidina dia nivory ary nanangona karazana mainty maro izay niatrika fifehezana be loatra sy faniriana ny fidirana amin'ireo mpitarika tamin'izany fotoana izany, tsy nino intsony ny fisian'ny lehilahy manam-pahefana afaka mamporisika ny fiaraha-monina manontolo, manana hevitra ambony momba ny tenany sy ny fahamendrehany.
Miaraka amin'ny aura i Garvey, ny fahavalony sy ny mpanakorontana (fotsy fotsy saingy tsy vitany) dia lavo tanteraka.
Na Eoropeana izy ireo na Amerikanina, dia hitany tamin'ny sarin'i Garvey, ny faran'ny fanararaotana voajanahary ny negro izay napetrak'izy ireo tamim-pahakingana sy ny fandrahonana ny fisian'ny fitakiana fahaleovan-tena matotra nipoitra avy amin'ny kaontinanta afrikanina.
Fa inona kosa ny heviny izay mampatahotra toy izany:
Ny fomba fijerin'i Garvey dia mifototra amin'ny foto-kevitra fototra anankiroa:
Ny an'ny firaisankinan'ny mainty na aiza na aiza misy azy eo amin'izao tontolo izao, na mainty hoditra avy any Eropa, Amerika, na ireo teraka tany amin'ny kaontinanta afrikanina, dia mitovy ny tolona. Ny fitakiana ny fanajana sy ny hasin'ny vahoaka iray manontolo. Ity fahatsiarovan-tena ity (ary vokatry ny fananana vahoaka) dia mandalo araka an'i Garvey amin'ny alàlan'ny fampahalalana sy fanabeazana. Ity fitsipiky ny firaisana ity dia manintona ny faharoa.
Ny fiverenan'ny tany afrikanina razambe Certain, izay fahazoana ny fanajana noho ny mainty hoditra, dia mamaky ny fananganana vahoaka matanjaka ara-toekarena, ara-politika, ara-kolontsaina ... ary koa manana andrim-panjakana, sekoly, hopitaly, orinasa… Garvey manao fampielezan-kevitra ny hiverina amin'ny tanin'i Afrika.
Hoy izy: "Ny hany fiarovana amin'ny tsy rariny amin'ny olombelona dia ny herin'ny ara-batana, ara-bola ary ara-tsiansa. Na indray: "Ny fampianarana dia ny fomba hanomanana ny vahoaka ny fananganana ny sivilizasiôna manokana sy ny fandrosoana sy ny voninahitry ny hazakazaka manokana ihany koa. "
Quote: "Ny fanandevozana dia fepetra apetraka amin'ny olona sy ny firazanana izay tsy matanjaka loatra hiaro na hiaro tena. Raha mbola iharan'ny loza mety hihosotra ny firazanana na ny vahoaka iray, dia antenaina fa hampihena ny fanandevozana izany indraindray. Marcus Garvey
"Amin'ny tolona hitsanganana, ny olona ampahorina dia kilemaina hatrany amin'ireo eo anivon'izy ireo izay mamadika ny firazanany, izany hoe ireo olona tsy manam-pinoana, ary ireo rehetra izay mamela ny tenany ho simba sy hanaiky hivarotra ny zon'ny tenany. ry rahalahiko. (…) Ny mpamadika ny hazakazaka mainty dia indrisy, matetika, olona any amin'ny toerana avo noho ny fanabeazana sy ny toerana ara-tsosialy, ireo izay manambony tena ho an'ny mpitondra. Amin'izao fotoana izao, raha ny marina, saika ny olona rehetra manandrana ny vintany amin'ny maha-mpitarika ny hazakazaka azy dia manomboka amin'ny fametrahana ny tenany, toy ny biby fiompy, amin'ny fanasoavan'ny mpanao asa soa amin'ny firazanana hafa: jereo, manimba ny firazanany amin'ny teny ratsy indrindra, manala baraka ny avonavony amin'ny maha-lehilahy ary amin'izany dia mahazo ny fiaraha-miory amin'ilay "mpanasoa be", izay mibaiko azy izay tokony hatao amin'ny andraikiny amin'ny maha-mpitarika ny hazakazaka mainty azy.
Marcus Garvey: Rain'ny Afrikanina an'ny Firenena Afrikanina - Boky 1 - Ny fiainany, ny heviny, ny zava-bitany
4 vaovao avy amin'ny € 28,95
6 ampiasaina amin'ny € 14,07
Vidio € 28,95
Nohavaozina farany tamin'ny 16 aprily 2021 12:03 maraina
Tarragona afrikana amin'ny tarot
Ny lalao fiaina sy ny fomba hilalaovana azy - Florence Scovel Shinn (Audio)
Hijery ny Vadiny (2018)
The Living Matrix - antontan-taratasy (2014)